OROMIYAA Keessatti Wayyaaneen OPDO Qabattee Maal Xaxaa Jirtii Maal Xaxaas Turtee? | QEERROO
Posted on January 5, 2018 by Qeerroo
Qabsoo ABO’n taasiseen, Waraanaa WBO humnaan cabsee darguu konkolaachise qophaa’aa isaatti Wayyaaneen abbaa taate. kun marti “karaa Sareen galte Waraabessi gala” isa jedhan, karaa booji’amtoota dargii kanneen waraana keessatti booji’amanii wabii lubbuun jiraachuu argachuuf Wayyaaneetti kufan irraan nu dhaqqabe. Gartuun booji’amtootaa OPDO waggoota dheeraaf lubbuu turuus dandaa’aniiru, kaayyoon isaanii lama buluu ture. Amma isa darbe kaasuurra kan ammaatti haa deebinu.
Keessattuu barattoota Yuunibarsiitii xumuranii baan kanneen hiriira qindeessan addatti Qeerroo Bilisummaa Oromoo tu barbaadama. Qeerroo Bilisummaa Oromoo gaggeessaa isaanii argachuun gaggeessaa Qeerroo tokko qabatan jechuun qabsoo sana dhaamsine jedhanii irratti walii galame. Kana irra dhabbatamee Oromiyaa keessatti amma hojiin bashbasha taeera. Barbaaddu hogganaa tauu, barbaaddu konkolaataan 3 ol sii kennamee magaalaa feete keessa sochootee hojii basaasummaa mootummaaf dalagda.
Projectii guddaa Wayyaaneen maallaqa itti dhangalaaste kun namoota akkamii gaagaaa jiraa?